Sinaanta UNka ma sidanbaa!!!!!!!. | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Sinaanta UNka ma sidanbaa!!!!!!!.
01/01/2012 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
Waxaa badanaa, marka laga hadlayo waxyaabaha ay UNku qabtaan la sheegaa iney ku dadaalaan sidii loo gaari lahaa sinaan iyo waxa ay afka ku buuxsadaan ee la yiraahdo Dimuqraadiyad, waana midda ay dad badan oo Soomaaliyah ay ka sugayaan shirarka ay mudadaan wadeen UNku oo kii ugu danbeeyay yahay midka lagu soo gabagabeeyay magaaladda Garoowe.
Shirkaas ayaa waxa la isku raacay in dalka Soomaaliya loogu soo dhiso Baarlamaan ka kooban midka hadda jira qaabka lagu soo xulaayana ay noqotaa qaabkii xaaraanta ku dhisnaa ee la lahaa 4.5ta. Hadaba waa iga su’aale aaway cadaaladdii ay UNku sheegi jireen? Waxey badanaa sheegaan in aan dumarka aanan la siinin wixii ay xaqqa u lahaayeen, Maxaa u diiday UNka iney ka horyimaadaan oo diidaan qaabkan foosha xun oo la yiri waxbaa loo soo qeybinayaa maadaama ay sheegaan in uu dadku siman yahay oo aysan jirin wax kala sareen ah. Maxaa keenay in qolo la yiraa waxaa tahay qolooyinka kale barkood? Ma waxa ay ku dhisan tahay tirakoob oo waxaa la ogaaday iney qolooyinka kale ka tiro yar yihiin mase waa nasab, oo UNka ayaa nasabka ansixiya?
Waase yaabe haddii ay qowlaysatada ka qeyb gashay shirkaas iyo kuwii ka horeeyayba ay in muddo ah ay ku soo biya cabayeeen awood qeybsigaan xaaraanta ku dhisan, maxaa ummadda Soomaaliyeed u diiday iney ka horyimaadaan oo ay yiraahdaan haddii wax la qeybinayo waa in si siman loo qeybiyaa oo aysan jirin qof ama qoys Soomaali ah oo ka liita qoyska kale? Runtii waa cajaa’ib iyo waxaanba la garaneyn si wax looga sheego. Iyagaa (UN) ku leh waa inaad na dhageysataa oo waxaan kuu dhisaynaa dowlad dimuqraadi ah hadana waxaaba meesha ka maqan wixii saldhigga u ahaan lahaa dowlad dimuqraadi ah oo ah sinaanta. Sidee laba nin oo aan sineyni wax u qeybsan karaan? Taas oo weliba kuwii sheegaayay iney cadaaladda iyo sinaanta taageeraan ay ansixinayaan wixii abuurayay cadaalad darada iyo kala sareynta? Waa wax lala yaabo waase wax loo baahan yahay inaan la daawanin oo weliba wax laga qabtaa.
Soomaaliyey, waxaad rabtaa inaad dhibka aad ka baxdo hadana waxaad rabtaa inaan dhibka laga wada bixin oo ay jiraan qoysas Soomaali ka mid ah oo aan iyagu laheyn wax cod ah. Ka waran haddii akhriste kasta oo maqaalkaan akhrinaya la yiraahdo, adiga qoyskaadu qiima ma leh sidaas darteed maba lagaala tashanayo waxa la idinka yeelaayo oo dad kale ayaaba kuu soo talinaaya. Waxaa hubanti ah in aad si layaab leh aad uga caroon laheyd. Maxaa kuu diidaaya inaad ka carooto dhibka iyo cadaalad darrada lagu sameynaayo walaalkaada Soomaaliga ah oo aad uga damqan la’ dahay sidii iyadoo adiga lagugu sameeyay? Waxaan in muddo ah aan ka soo raali aheyn cadaalad darro soo socotay oo weliba ka soo bilaabatay maalintii aan dowladda noqonay horaamihii lixdameeyadii, hadaba waa in maanta loo istaagaa sidii loo diidi lahaa loogana hor imaan lahaa cadaalad darata socota waa haddii aan rabno in cadaalad la helo. Waxaa laga yaabaa in dad badani is lee yihiin aniga ma aha waxa dhibku heysto waxna igama gelin balse ogow waxaa jirta maahmaah Soomaaliyeed oo tiraahda “Colaadda galbeed laga sheeego, gundahaada ka day” oo loola jeedo wax kasta oo aad is tiraahdo adiga kuma quseeyaan in laga yaabo iney maalin ku qabsato. Hadaba maxaa diidaaya, haddii uusan adiga dhibkaan aan hadda ka sheekeynaayo uusan ku heysanin, inaad fahanto oo aad ka gilgilato oo aad raadiso waxa walaalkaada Soomaaliyeed xaqqa u lee yahay oo loogu diidaayo waxa aan la fahmi karin.
Runtii waa dood adag oo laga yaabo ineysan maanta dad badan u cadeyn, waxaase hubanti ah inaan u baahanahay inaan fahanno qaabka aan wax u cabirno, oo aan gaarno sidii wax kasta oo la rabo in wax lagu hagaajiyo ay marka horeba u ekaadaan wax xal keeni kara. Waayo anigu ma garanaayo qaabka ay xal u keeni karto qabyaalad, hadana la lee yahay qabiil ayaa qabiilka kale ka culeys badan. Maxaa diidaaya in baarlamaanka loo qeybiyo si siman oo weliba meesha 4.5ta ah laga dhigo 5 QEYBOOD? Maxaa diidaaya in dadka soomaaliyeedi si siman loo sooro waxna ku qeybsadaan? Waxaad moodaa in Soomaalidu isaga xuntahay dadka ay gumeystaha ku sheegaan. Waayo waxa aad arkeysaa in boqolaal caaqil isku sheegaaya iyo aqoonyahan iyo wadaad iyo mid kasta oo la dhihi lahaa wax ka dheh arintaan guracan iney ku wada qancayaan qeysiga aan kor ku soo sheegay. Seen rabnaa inaan dal iyo dad ugu daneyno haddiiba inta aan la isgaarin Soomaalida qaar la lee yahay adinku qiima ma lihidiin oo waxaad qaadataan waxa soomaalida kale la siiyo barkeed. Waa wax loo baahan yahay in laga gudbo, qaabka kaliya oo looga gudbi karana waa innaga oo diidna oo weliba si qayaxan uga soo horjeesanna sida wax loo wado oo ay dadka qaar u arkaan inuu xal yahay balse aan xal noqoneynin haddiiba uu jiro qof Soomaali ah oo dhibi ka soo gaarayso oo loogu diidaayo inuu dadka kale la sinaado.
Ogow waxaan maanta ka sheekeyneyno waa wax in muddo ah soo jiray balse aan u maleynaayo in la gaaray maalintii la dhihi lahaa ha la joojiyo, waayo waxa aan dhamaanteen rabno oo aan daneyneyno waa in la helaa qaab ka duwan qaababka hadda jira, sida wax loo qeybinayo ayaanna ugu horeeyo waxa loo baahan yahay in wax laga bedelo. Haddii aysan suurta gal aheyn in magaalooyin la iska soo doorto maanta oo qaabka kaliya oo lagu soo xuli karo baarlamaan ay tahay in qabiiladu ay soo xushaan dadkii mateli lahaa, waa inaan la dhihin qabiiladaas ayaa qabiilada kale ka culeys badan oo aan sidaas wax loo qeybin. Haddii maanta aan raali ka noqonno in walaal Soomaaliyeed sidaas loola dhaqmo, waxaan u maleynayaa in aan xal Soomaaliyeed aan loo soconin oo waxa loo socdaa uu yahay wax kale oo aananba garaneynin ujeedadooda. Sinaantu waa furaha nolosha, waa iridda nabadda, waa wadada lagu gaaro wax kasta oo horumar keenna kara. Waa ineynnu isu hiilinno oo aan diidno cadaalad darro sharci ah oo Soomaali lagu kala faguugo. Waxaadan raali ka noqon laheyn waa inaad u diidaa in walaalkaa lagu qasbo oo weliba looga dhigaa wax sharci ah. U diid walaalkaa waxaad naftaada u diidi laheyd.
« Shir Qof lagu Qancinayo Qaran waxba uma tarayo.
Gacanta Sareysa ayaa ka kheyr badan tan hooseysa. »